Ity vokatra ity dia mety amin'ny rafitra simenitra mihantona amin'ny tetik'asa fitehirizana LNG ary ampiasaina amin'ny tontolo hafanana ambany hafa. Ny firafiny dia 1X7 ary ny savaivony nominal dia 15.20mm, 15.7mm & 17.80mm. Ny fiviliana azo ekena amin'ny savaivony dia tanterahina fatratra toy ny isaky ny + 0.20mm, -0.10mm. Ny tanjaky ny tanjaka dia 1860Mpa; ny elongation tanteraka eo ambany herin'ny hery (Agt) dia takiana ≥5.0%; ny vaky aorian'ny vaky dia plastika; ny tahan'ny fihenan'ny faritra (Z) dia ≥25%; ny savaivon'ny tariby afovoany dia tsy latsaky ny 1.03 fotoana amin'ny savaivony tariby ivelany. Ny kofehy dia tsy misy teboka mihombo. Izy io dia manana fampisehoana an-tampon'ny maripana ambany ambany. Amin'ny -196 +/- 5 ° C, ny strand dia ampifandraisina amin'ny fivorian'ny vatofantsika, ny coefficient efficace (ή) dia ≥95%, ary ny elongation manontolo eo ambanin'ny enta-mavesatra indrindra dia -2.0%. Safidy voalohany ho an'ny injeniera aorian'ny fihenjanana ny rindrin'ny tanky ivelany LNG. Ny vokatra dia afaka mahafeno ny fepetra takian'ny prEN10138, EN14620-3 ary ny fenitra hafa.
Manana ny tombotsoantsika manokana izahay mpiasa, endrika sy ekipa mpamorona endriny, vondrona teknika, mpiasa an-tsambo QC sy mpiasa fonosana. Manana fomba fifehezana kalitao tsara ho an'ny dingana tsirairay izahay izao. Ary koa, ny mpiasa rehetra ao aminay dia za-draharaha amin'ny fanontana lohahevitra maimaimpoana ho an'ny Post Tension Accessories PC Steel Wire miaraka amin'ny vidiny tsara indrindra sinoa, amin'ny maha-orinasa an-dàlam-pandrosoana antsika, mety tsy izahay no tena mahasoa indrindra, fa niezaka ny hahasoa anao indrindra izahay mpiara-miasa
Santionany maimaim-poana ho an'ny China Spiral Ribbed Wire, Non-Alloy Wire, ny vokatray dia novokarina niaraka tamin'ny akora tsara indrindra. Isaky ny fotoana dia manatsara ny programa famokarana tsy tapaka izahay. Mba hiantohana ny kalitao sy ny serivisy, dia nifantoka tamin'ny fizotry ny famokarana izahay. Nahazo dera avo avy amin'ny mpiara-miasa izahay. Izahay dia niandry ny fananganana fifandraisana ara-barotra aminao.
Diameter Nomera D / mm Tensile Strength Rm / Mpa Maximum Force Fm / KN Sarany faran'izay Maximum Force Fm max / KN ≥ 0.2% Hery porofon'ny Fp0.2 / KN ≥ Elongation amin'ny alàlan'ny Max. Force L0≥500mmm Agt /% ≥ fialam-boly
Famoahana voalohany ho% Fma 1000h Fitsaharana /% ≤
Teo aloha: PC Strand nandrisika (Aluminium)
Manaraka: Plain, Spiral Rib ary Indient PC Strand (tariby 2, tariby 3 ary tariby 7)
Unconded Pc Strand